ရှုံးကြွေးဆပ်ရဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ PSG.LGD – TI9 Team Profile – Gaming Noodle
ရှုံးကြွေးဆပ်ရဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ PSG.LGD – TI9 Team Profile
PSG.LGD ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် TI8 တုန်းက ဒုတိယ ရရှိထားတဲ့ တရုတ် DotA2 အသင်းကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မူလက For The Dream ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ အသင်းဟာ SMM 2009 မှာ အနိုင်ရရှိပြီးနောက် LGD က sponsor ပေးခဲ့တဲ့အတွက် အသင်းနာမည်ကိုပါ LGD လို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း LGD ဟာ ၂၀၁၈ ဧပြီလမှာ ပြင်သစ်ဘောလုံးကလပ်အသင်း Paris Saint-Germain (PSG) နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ယနေ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ PSG.LGD ဆိုတဲ့ နာမည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ PSG.LGD ဟာ လက်ရှိမှာ Ame, Somnus丶M, Chalice, Fy နဲ့ xNova တို့ဖြင့် TI8 တုန်းကအတိုင်း မပြောင်းလဲပဲဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ PSG.LGD ဟာ တရုတ်အင်အားကြီး အသင်းအနေနဲ့ ရပ်တည်နေခဲ့တာ အချိန်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။
PSG.LGD ဆိုပြီး အသင်းနာမည်ကို အတိအကျပြောင်းလိုက်ပြီးချိန်ကနေ ယခု အချိန်ထိ ထင်ရှားလှတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကတော့ TI8 ရဲ့ ဒုတိယနေရာအပြင် EPICENTER XL နဲ့ MDL Changsha Major 2018 တို့မှာလည်း ပထမနေရာများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ PSG.LGD အဖြစ်အသင်းနာမည်မပြောင်းရသေးခင်မှာလည်း ဒီလူစာရင်းနဲ့ပဲ Dota2Asia Championships 2018 မှာ ဒုတိယ ရယူနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Somnus丶M နဲ့ Ame တို့ဟာ အသင်းထဲကိုရောက်ရှိနေတာ ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိအသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Fy နဲ့ Chalice တို့ကတော့ TI7 အပြီး ၂၀၁၇ အသင်းသားအပြောင်းအလဲမှာမှ ရောက်လာခဲ့တာပါ။ xNova ကတော့ ၂၀၁၈ မှာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
LGD 2015 Roster – DDC, Sylar, rOtk, Maybe and MMY!.
Maybe လို့ လူသိများတဲ့ Somnus丶M ဟာ အသင်းထဲကို ၂၀၁၅ ထဲက ရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ PSG.LGD အသင်းသားတွေထဲမှာ သူဟာ အစောဆုံးရောက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်လာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ထိုစဉ်က သူ့ရဲ့အသင်းဟာ i-League Season3မှာ ပထမ ရခဲ့သလို TI5 တတိယနေရာ ရရှိအောင်လည်း စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ TI5 ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ Evil Geniuses နဲ့ ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲများကိုသာ မရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် grand final ထိ တက်သွားနိုင်ခဲ့တာပါ။ ထိုနှစ်ထဲမှာပဲ World Cyber Arena 2015 မှာ ဒုတိယရခဲ့ပါတယ်။ ထိုစဉ်က Somnus丶M နဲ့ တွဲဆော့ခဲ့တဲ့ TI5 ဝင် အသင်းသားများကတော့ Sylar, Yao, Xiao8 နဲ့ MMY! တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် ၂၀၁၆ နှောင်းပိုင်းမှာ Ame ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Ame နဲ့ Somnus丶M တို့ရဲ့အသင်းဟာ ၂၀၁၆ နှစ်ကုန်အထိနဲ့ ၂၀၁၇ နှစ်တစ်ဝက်လောက်မှာ ထူးထူးခြားခြား ဆုကြီး ရရှိခြင်း မရှိသေးပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း ကစားပုံများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးနောက် Mars Dota2League 2017 မှာ ပထမ ရရှိလာပါတယ်။ နောက်တစ်လခန့်အကြာမှာ TI7 ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရာ lower bracket မှာ ဆက်တိုက်နိုင်လာခဲ့မယ့် ထိုနှစ် TI7 ချန်ပီယံ Team Liquid ကို နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ စတုတ္ထနေရာနဲ့ ကျေနပ်ခဲ့ရတာပါ။ ထိုစဉ်က Ame နဲ့ Somnus丶M တို့ရဲ့ အသင်းဖော်များဟာ eLeVeN, Yao နဲ့ Victoria တို့ ဖြစ်ပြီး နည်းပြကတော့ QQQ ဖြစ်ပါတယ်။
LGD TI7 Roster – Victoria, Yao, Somnus丶M, eLeVeN, and Ame
TI7 အပြီး Fy, Chalice နဲ့ xNova တို့ ပါဝင်တဲ့ လက်ရှိလူစာရင်းပြည့် PSG.LGD အဖြစ်နဲ့ Epicenter XL ကို ဝင်ရောက်ကစားခဲ့ရာမှာတော့ TI7 တုန်းက ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ Team Liquid ကို final မှာ အနိုင်ရရှိပြီး ပထမ ရ လက်စားချေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် Virtus.pro လို အင်အားကြီးအသင်းများကိုလည်း အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။ MDL Changsha Major 2018 မှာ အနိုင်ရရှိပြီး နောက် PSG.LGD ဟာ TI8 ကို ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အနိုင်ရရှိရေးအတွက် များစွာ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။
TI8 upper bracket မှာ Virtus.pro ကို ၂ပွဲပြတ်နဲ့ နိုင်လာတဲ့ PSG.LGD ဟာ ဆက်လက်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်များမှာ ချန်ပီယံဟောင်း Team Liquid ကိုပါ ၂ပွဲပြတ် ထပ်နိုင်ပြီး lower bracket ကို ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Hero pool ကျယ်တဲ့အသင်းသားများဟာ ပြိုင်ဘက်ကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဖိအားပေး ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Lane ၃ ခုလုံးမှာ teamwork ညီစွာ အကောင်းဆုံးကစားတဲ့ ပုံစံနဲ့ PSG.LGD ဟာ လုံးဝလျော့တွက်လို့ မရခဲ့တာပါ။ Team Liquid ကို အနိုင်ရ အပြီး OG နဲ့ Bo3 သုံးပွဲ ကစားခဲ့ရာမှာတော့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး lower bracket ကို ဆင်းကာ grand final ကို တက်ရောက်ခွင့်ရရေး ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။
OG နဲ့ ပထမဆုံးပွဲမှာ ရန်သူအသင်းရဲ့ IO+Gyro အတွဲကို မယှဉ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး PSG.LGD ဘက်က Drow Ranger, Huskar နဲ့ Weaver တို့ဟာ late game မှာ support Wraith King ကိုတောင် မသတ်နိုင်ဖြစ်ကာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ ဒုတိယပွဲမှာတော့ Ame ရဲ့ Clinkz ရော Somnus丶M ရဲ့ Storm Spirit ပါ လက်စွမ်းပြ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တတိယမြောက်ပွဲမှာတော့ ပွဲအစောတည်းက ဖိကစားနေခဲ့တဲ့ PSG.LGD ဟာ တဖက်အသင်းရဲ့ Throne ကို ရိုက်ဖို့ကြိုးစားရာမှာ စိတ်လောကြီးနေတဲ့ Ame ရဲ့ Terrorblade အပါအဝင် တစ်သင်းလုံးနီးပါးကို ရန်သူ Earth Shaker က ခုန်အုပ် ultimate သုံးပြီး ချေမှုန်းခံခဲ့ရပါတယ်။ Pushing ကောင်းတဲ့ ရန်သူ Arc Warden နဲ့ Pugna တို့ကြောင့် ပြိုင်ဘက် OG အလျင်အမြန် ပြန်လည် အနိုင်ရသွားခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် PSG.LGD ဟာ lower bracket မှာ EG ကို လွယ်လွယ်ကူကူ နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်ပြီး TI8 grand final ကြီးကို OG နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပြန်တက်လာပါတော့တယ်။ TI8 grand final မှာ ပထမဆုံးပွဲအမှားအနေနဲ့ကတော့ OG ကို Spectre ပေးထုတ်လိုက်ပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယပွဲမှာ မြင်ဖူးပြီးသား ရန်သူရဲ့ IO+Gyro အတွဲကို Kunkka နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြည်ပြီး အနိုင်ယူသွားခဲ့သလို တတိယပွဲမှာလည်း Alchemist, Weaver တို့နဲ့ အမြန် farm ပြီး ဂိမ်းကို အနိုင်နဲ့ ပွဲသိမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ စတုတ္ထပွဲမှာတော့ ရန်သူ Axe ရဲ့ counter, Tuskar ရှိနေခဲ့ပေမယ့် PSG.LGD ရဲ့ core ကစားသမားများဟာ ပါးနပ်လွန်းလှတဲ့ Axe ရဲ့ ခုန်ဖမ်းခြင်းကို ခဏခဏ ခံရပြီး ရှုံးကြပါတော့တယ်။ စတုတ္ထပွဲမှာသာ မရှုံးနိမ့်ခဲ့ပဲ အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် PSG.LGD ကို ယနေ့ခေတ် TI8 ချန်ပီယံအဖြစ်မြင်တွေ့ကြရမယ့် အခြေအနေအထိ အသင်းသားများ အားလုံးဟာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
OG vs LGD.PSG TI8 Grand Final
TI8 grand final ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲအရှုံးရလာဒ်ကတော့ PSG.LGD အတွက် ရင်နင့်စရာပါ။ ပြိုင်ဘက် OG အပေါ် Draft အသာစီးရရှိထားခဲ့သလို ပထမပိုင်း ၁၇ မိနစ်အထိ Kill 18-4 အသာနဲ့ ကစားနေနိုင်ခဲ့တာပါ။ နိုင်ပြီလို့ အားလုံး အပိုင်ယူဆထားကြပေမယ့် Roshan pit battle မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ မှားယွင်းခဲ့တဲ့အချိန်က စ လို့ ဆက်တိုက်ပြန်လည် ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Somnus丶M ဟာ mid lane Kunkka ကို အမာ item များ ထည့်တဲ့အတွက်တော့ အနည်းငယ် ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ PSG.LGD ဟာ TI8 မှာ ဒုတိယပဲရခဲ့ပေမယ့် တရုတ်ပရိတ်သတ်များရော တစ်ကမ္ဘာလုံးက DotA ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ်များရဲ့ ရင်ထဲကို ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အတိတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာများကို ရယူကာ PSG.LGD ဟာ ယခု လာမယ့် TI9 မှာ ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်အပေါ်အထင်သေးတတ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ဆန္ဒလောခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ကာ PSG.LGD ဟာ တစ်နှစ်တာလုံး အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမသုံးရန် နှင့် ဆေးလိပ် မသောက်ရန် စသော တင်းကြပ်သည့် စည်းကမ်းများနဲ့ လေ့ကျင့်နေတဲ့ အကြောင်းလည်း မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ TI8 မှာ လွဲချော်ခဲ့တဲ့ အသင်းကြီးဟာ TI9 ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစား ကစားနေတာကို မကြာခင်မှာ အားလုံးတွေ့မြင်ကြရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
By Combo (Htet Wai Yan)
ရှုံးကွှေးဆပျရဖို့ အသငျ့ဖွဈနတေဲ့ PSG.LGD – TI9 Team Profile
PSG.LGD ဟာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈ TI8 တုနျးက ဒုတိယ ရရှိထားတဲ့ တရုတျ DotA2 အသငျးကွီး ဖွဈပါတယျ။ မူလက For The Dream ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ စတငျခဲ့တဲ့ အသငျးဟာ SMM 2009 မှာ အနိုငျရရှိပွီးနောကျ LGD က sponsor ပေးခဲ့တဲ့အတှကျ အသငျးနာမညျကိုပါ LGD လို့ပွောငျးလဲခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျး LGD ဟာ ၂၀၁၈ ဧပွီလမှာ ပွငျသဈဘောလုံးကလပျအသငျး Paris Saint-Germain (PSG) နဲ့ ပူးပေါငျးခဲ့ပွီး ယနမွေ့ငျတှနေ့ရေတဲ့ PSG.LGD ဆိုတဲ့ နာမညျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ PSG.LGD ဟာ လကျရှိမှာ Ame, Somnus丶M, Chalice, Fy နဲ့ xNova တို့ဖွငျ့ TI8 တုနျးကအတိုငျး မပွောငျးလဲပဲဖှဲ့စညျးထားပါတယျ။ PSG.LGD ဟာ တရုတျအငျအားကွီး အသငျးအနနေဲ့ ရပျတညျနခေဲ့တာ အခြိနျအတျောကွာခဲ့ပါပွီ။
PSG.LGD ဆိုပွီး အသငျးနာမညျကို အတိအကပြွောငျးလိုကျပွီးခြိနျကနေ ယခု အခြိနျထိ ထငျရှားလှတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေတော့ TI8 ရဲ့ ဒုတိယနရောအပွငျ EPICENTER XL နဲ့ MDL Changsha Major 2018 တို့မှာလညျး ပထမနရောမြား ရရှိခဲ့ပါတယျ။ PSG.LGD အဖွဈအသငျးနာမညျမပွောငျးရသေးခငျမှာလညျး ဒီလူစာရငျးနဲ့ပဲ Dota2Asia Championships 2018 မှာ ဒုတိယ ရယူနိုငျခဲ့ပါသေးတယျ။ Somnus丶M နဲ့ Ame တို့ဟာ အသငျးထဲကိုရောကျရှိနတော ကွာပွီဖွဈပမေယျ့ လကျရှိအသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈသူ Fy နဲ့ Chalice တို့ကတော့ TI7 အပွီး ၂၀၁၇ အသငျးသားအပွောငျးအလဲမှာမှ ရောကျလာခဲ့တာပါ။ xNova ကတော့ ၂၀၁၈ မှာ ရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။
Maybe လို့ လူသိမြားတဲ့ Somnus丶M ဟာ အသငျးထဲကို ၂၀၁၅ ထဲက ရောကျနခေဲ့တာဖွဈပွီး လကျရှိ PSG.LGD အသငျးသားတှထေဲမှာ သူဟာ အစောဆုံးရောကျရှိသူဖွဈပါတယျ။ ရောကျလာပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ ထိုစဉျက သူ့ရဲ့အသငျးဟာ i-League Season3မှာ ပထမ ရခဲ့သလို TI5 တတိယနရော ရရှိအောငျလညျး စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ TI5 ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ Evil Geniuses နဲ့ ပွိုငျခဲ့တဲ့ပှဲမြားကိုသာ မရှုံးနိမျ့ခဲ့ရငျ grand final ထိ တကျသှားနိုငျခဲ့တာပါ။ ထိုနှဈထဲမှာပဲ World Cyber Arena 2015 မှာ ဒုတိယရခဲ့ပါတယျ။ ထိုစဉျက Somnus丶M နဲ့ တှဲဆော့ခဲ့တဲ့ TI5 ဝငျ အသငျးသားမြားကတော့ Sylar, Yao, Xiao8 နဲ့ MMY! တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထို့နောကျ ၂၀၁၆ နှောငျးပိုငျးမှာ Ame ရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ Ame နဲ့ Somnus丶M တို့ရဲ့အသငျးဟာ ၂၀၁၆ နှဈကုနျအထိနဲ့ ၂၀၁၇ နှဈတဈဝကျလောကျမှာ ထူးထူးခွားခွား ဆုကွီး ရရှိခွငျး မရှိသေးပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျး ကစားပုံမြား ပိုမိုကောငျးမှနျလာပွီးနောကျ Mars Dota2League 2017 မှာ ပထမ ရရှိလာပါတယျ။ နောကျတဈလခနျ့အကွာမှာ TI7 ကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွရာ lower bracket မှာ ဆကျတိုကျနိုငျလာခဲ့မယျ့ ထိုနှဈ TI7 ခနျြပီယံ Team Liquid ကို နောကျဆုံးအခွအေနမှော ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ စတုတ်ထနရောနဲ့ ကနြေပျခဲ့ရတာပါ။ ထိုစဉျက Ame နဲ့ Somnus丶M တို့ရဲ့ အသငျးဖျောမြားဟာ eLeVeN, Yao နဲ့ Victoria တို့ ဖွဈပွီး နညျးပွကတော့ QQQ ဖွဈပါတယျ။
TI7 အပွီး Fy, Chalice နဲ့ xNova တို့ ပါဝငျတဲ့ လကျရှိလူစာရငျးပွညျ့ PSG.LGD အဖွဈနဲ့ Epicenter XL ကို ဝငျရောကျကစားခဲ့ရာမှာတော့ TI7 တုနျးက ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရတဲ့ Team Liquid ကို final မှာ အနိုငျရရှိပွီး ပထမ ရ လကျစားခနြေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပှဲစဉျတဈလြှောကျ Virtus.pro လို အငျအားကွီးအသငျးမြားကိုလညျး အနိုငျရရှိခဲ့တာပါ။ MDL Changsha Major 2018 မှာ အနိုငျရရှိပွီး နောကျ PSG.LGD ဟာ TI8 ကို ဝငျရောကျခှငျ့ရခဲ့ပွီး အနိုငျရရှိရေးအတှကျ မြားစှာ ကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ။
TI8 upper bracket မှာ Virtus.pro ကို ၂ပှဲပွတျနဲ့ နိုငျလာတဲ့ PSG.LGD ဟာ ဆကျလကျကစားတဲ့ပှဲစဉျမြားမှာ ခနျြပီယံဟောငျး Team Liquid ကိုပါ ၂ပှဲပွတျ ထပျနိုငျပွီး lower bracket ကို ပို့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ Hero pool ကယျြတဲ့အသငျးသားမြားဟာ ပွိုငျဘကျကို ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ ဖိအားပေး ကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ Lane ၃ ခုလုံးမှာ teamwork ညီစှာ အကောငျးဆုံးကစားတဲ့ ပုံစံနဲ့ PSG.LGD ဟာ လုံးဝလြော့တှကျလို့ မရခဲ့တာပါ။ Team Liquid ကို အနိုငျရ အပွီး OG နဲ့ Bo3 သုံးပှဲ ကစားခဲ့ရာမှာတော့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး lower bracket ကို ဆငျးကာ grand final ကို တကျရောကျခှငျ့ရရေး ဆကျလကျ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ရပါတယျ။
OG နဲ့ ပထမဆုံးပှဲမှာ ရနျသူအသငျးရဲ့ IO+Gyro အတှဲကို မယှဉျနိုငျဖွဈခဲ့ရပွီး PSG.LGD ဘကျက Drow Ranger, Huskar နဲ့ Weaver တို့ဟာ late game မှာ support Wraith King ကိုတောငျ မသတျနိုငျဖွဈကာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။ ဒုတိယပှဲမှာတော့ Ame ရဲ့ Clinkz ရော Somnus丶M ရဲ့ Storm Spirit ပါ လကျစှမျးပွ ကစားနိုငျခဲ့ပွီး အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ တတိယမွောကျပှဲမှာတော့ ပှဲအစောတညျးက ဖိကစားနခေဲ့တဲ့ PSG.LGD ဟာ တဖကျအသငျးရဲ့ Throne ကို ရိုကျဖို့ကွိုးစားရာမှာ စိတျလောကွီးနတေဲ့ Ame ရဲ့ Terrorblade အပါအဝငျ တဈသငျးလုံးနီးပါးကို ရနျသူ Earth Shaker က ခုနျအုပျ ultimate သုံးပွီး ခမြှေုနျးခံခဲ့ရပါတယျ။ Pushing ကောငျးတဲ့ ရနျသူ Arc Warden နဲ့ Pugna တို့ကွောငျ့ ပွိုငျဘကျ OG အလငျြအမွနျ ပွနျလညျ အနိုငျရသှားခဲ့တာပါ။
ဒါပမေယျ့ PSG.LGD ဟာ lower bracket မှာ EG ကို လှယျလှယျကူကူ နှဈပှဲပွတျနိုငျပွီး TI8 grand final ကွီးကို OG နဲ့ ယှဉျပွိုငျဖို့ ပွနျတကျလာပါတော့တယျ။ TI8 grand final မှာ ပထမဆုံးပှဲအမှားအနနေဲ့ကတော့ OG ကို Spectre ပေးထုတျလိုကျပွီး ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒုတိယပှဲမှာ မွငျဖူးပွီးသား ရနျသူရဲ့ IO+Gyro အတှဲကို Kunkka နဲ့ လှယျလှယျကူကူ ဖွညျပွီး အနိုငျယူသှားခဲ့သလို တတိယပှဲမှာလညျး Alchemist, Weaver တို့နဲ့ အမွနျ farm ပွီး ဂိမျးကို အနိုငျနဲ့ ပှဲသိမျးနိုငျခဲ့တာပါ။ စတုတ်ထပှဲမှာတော့ ရနျသူ Axe ရဲ့ counter, Tuskar ရှိနခေဲ့ပမေယျ့ PSG.LGD ရဲ့ core ကစားသမားမြားဟာ ပါးနပျလှနျးလှတဲ့ Axe ရဲ့ ခုနျဖမျးခွငျးကို ခဏခဏ ခံရပွီး ရှုံးကွပါတော့တယျ။ စတုတ်ထပှဲမှာသာ မရှုံးနိမျ့ခဲ့ပဲ အနိုငျရရှိခဲ့မယျဆိုရငျ PSG.LGD ကို ယနခေ့တျေ TI8 ခနျြပီယံအဖွဈမွငျတှကွေ့ရမယျ့ အခွအေနအေထိ အသငျးသားမြား အားလုံးဟာ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။
TI8 grand final ရဲ့ နောကျဆုံးပှဲအရှုံးရလာဒျကတော့ PSG.LGD အတှကျ ရငျနငျ့စရာပါ။ ပွိုငျဘကျ OG အပျေါ Draft အသာစီးရရှိထားခဲ့သလို ပထမပိုငျး ၁၇ မိနဈအထိ Kill 18-4 အသာနဲ့ ကစားနနေိုငျခဲ့တာပါ။ နိုငျပွီလို့ အားလုံး အပိုငျယူဆထားကွပမေယျ့ Roshan pit battle မှာ ဆုံးဖွတျခကျြမြား မှားယှငျးခဲ့တဲ့အခြိနျက စ လို့ ဆကျတိုကျပွနျလညျ ရှုံးနိမျ့သှားခဲ့ပါတယျ။ Somnus丶M ဟာ mid lane Kunkka ကို အမာ item မြား ထညျ့တဲ့အတှကျတော့ အနညျးငယျ ဝဖေနျခံခဲ့ရပါတယျ။ PSG.LGD ဟာ TI8 မှာ ဒုတိယပဲရခဲ့ပမေယျ့ တရုတျပရိတျသတျမြားရော တဈကမ်ဘာလုံးက DotA ပှဲကွညျ့ ပရိတျသတျမြားရဲ့ ရငျထဲကို ရောကျရှိအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့အသငျးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
အတိတျမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့သငျခနျးစာမြားကို ရယူကာ PSG.LGD ဟာ ယခု လာမယျ့ TI9 မှာ ပွနျလညျ ယှဉျပွိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျဘကျအပျေါအထငျသေးတတျခွငျးနဲ့ စိတျဆန်ဒလောခွငျးတို့ကို ပွုပွငျကာ PSG.LGD ဟာ တဈနှဈတာလုံး အကောငျးဆုံးလကေ့ငျြ့နခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးမသုံးရနျ နှငျ့ ဆေးလိပျ မသောကျရနျ စသော တငျးကွပျသညျ့ စညျးကမျးမြားနဲ့ လကေ့ငျြ့နတေဲ့ အကွောငျးလညျး မကွာသေးခငျက ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ TI8 မှာ လှဲခြျောခဲ့တဲ့ အသငျးကွီးဟာ TI9 ခနျြပီယံ ဖွဈဖို့ အပွငျးအထနျကွိုးစား ကစားနတောကို မကွာခငျမှာ အားလုံးတှမွေ့ငျကွရတော့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။